Maqaallada Lara Albert ee Martech Zone |
Maqaallada by Lara Albert
Lara waa Madaxweyne kuxigeenka Suuqgeynta Caalamiga ah Globys halkaasoo ay ka qaadanayso mas'uuliyadaha suuqgeynta shirkadaha isla markaana ay u horseedayso suuq geynta alaabada suuqgeynta macnaha guud ee shirkadda. Markii hore waxay qabatay maareynta sumcadda sare iyo doorka suuqgeynta wax soo saarka ee Kraft Foods, America Online iyo VeriSign.
Amplero: Waddo Caqli Badan oo Lagu Yareyn Karo Macaamiisha
Wednesday, September 23, 2015 Talaado, September 22, 2015 Lara Albert
Marka ay timaado yareynta qiiqa macmiilka, aqoontu waa awood gaar ahaan haddii ay tahay qaab aragti qani ku ah dabeecadda. Ka ganacsade ahaan waxaan sameynaa wax walba oo aan kari karno si aan u fahamno sida macaamiisha u dhaqmaan iyo sababta ay uga baxayaan, si aan uga hor tagno. Laakiin waxa suuqleyntu badanaa helaan waa sharraxaad xannibaad halkii ay ka ahaan lahaayeen saadaal dhab ah oo ku saabsan halista nabarrada. Marka sidee uga hor tagi kartaa dhibaatada? Sideed u saadaalin kartaa qofka
Suuqleyda iyo Barashada Mashiinka: Si dhakhso badan, Caqli badan, waxtar badan
Muddo tobanaan sano ah baaritaanka A / B waxaa adeegsanayay suuqleyda si loo go'aamiyo waxtarka dalabyada ee heerarka jawaabta wadista. Suuqleyda waxay soo bandhigaan laba nooc (A iyo B), waxay cabbiraan heerka jawaabta, waxay go'aamiyaan guuleystaha, ka dibna waxay u fidiyaan qof walba dalabkan. Laakiin, aan wajahno. Qaabkani waa curyaaminta gaabis, caajis, iyo cudurdaar la'aan khalad ah - gaar ahaan marka aad ku dalbatid moobilka. Muxuu suuqgeeyaha moobiilku runtii u baahan yahay waa hab lagu go'aamiyo dalab sax ah